မဟာဗုဒ္ဓဝင်၊ ၀ိနိစ္ဆယနှင့် ဘာသာရေးစာအုပ်များ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > ရသစုံလင် > ဘာသာရေးကဏ္ဍ > စာအုပ်များ > မဟာဗုဒ္ဓဝင်၊ ၀ိနိစ္ဆယနှင့် ဘာသာရေးစာအုပ်များ
View Full Version : မဟာဗုဒ္ဓဝင်၊ ၀ိနိစ္ဆယနှင့် ဘာသာရေးစာအုပ်များ
ခရစ်ယာန်ဘာသာ မှ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကူးပြောင်းလာသူတစ်ယောက်အကြောင်း
မြန်မာကျူးပစ်မှာ ကို မောင်စိုင်း ရိုက်တင်ပေးတာကို ညီမလေး ကလျာက ပီဒီအက်ဖ်လုပ်ပေးထားတာပါ။
မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) ဆရာတော် ရဲ့
လူဖြစ်ရခြင်း ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် စာအုပ်
အတော်ကို ကောင်းတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။
New York Time Best Seller စာအုပ် ဖြစ်တဲ့
ှSam Harris ရေးတဲ့
ွှ့The End of Faith စာအုပ်ပါ။
The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason (2004) isabook written by Sam Harris, concerning organized religion, the clash between religious faith and rational thought, and the problems of tolerance towards religious fundamentalism.
Harris began writing the book in what he described asaperiod of &quot;collective grief and stupefaction&quot; following the September 11, 2001 attacks. The book comprisesawide-ranging criticism of all styles of religious belief.
The book was first published in August 2004, and it was awarded the PEN/Martha Albrand Award for First Nonfiction the following year. The paperback edition was published in October 2005. In the same month it entered the New York Times Best Seller list at number four, and remained on the list foratotal of 33 weeks.
E-BOOK: File Size: 1.69 MB :
Download (33 MB):
ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားစာအုပ်ရေးပြီး ဝေဖန်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ကြောင့်
ဗုဒ္ဓဘာသာအတော်များများ ဘာသာပြောင်းကုန်တယ်လို့ သိရတယ်။
ဒီစာအုပ်ကို မစိုးရိမ်စာသင်သားဆရာတော်ကနေ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းချက်ဆိုးပြီး ပြန်လည် ရှင်းလင်းထားတဲ့ စာအုပ်ပါ။
နဂိုပီဒီအက်ဖ်မှာ ဖိုင်က ၃ခု ဖြစ်နေလို့ ကျူးပစ်က ညီမ Claire က ဖိုင်တစ်ခုတည်း ဖြစ်အောင်ပြန်ပေါင်းပေးထားတာပါ။
http://www.fileden.com/files/2009/1/4/2252355//Reply to Nirvana.pdf
understanding Mohamad by Ali Sina
မြန်မာကျူးပစ်က ကိုဇေကြီး စကန်ဖတ်တင်ပေးထားတာပါ။
သာသနာတော် နှစ်တစ်ထောင်ခန့်အကြာတွင် အိန္ဒိယပြည်၌ သာသနာကွယ်ပျောက်ခဲ့ရာ ထိုသို့ ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရခြင်းသည် ဗုဒ္ဓ၏ တပည့်သား ရဟန်းတော်များသည် ဗုဒ္ဓ၏ စံနမူနာကို မလိုက်နာကြဘဲ ကိုယ်ကျိုးဖက်ခဲ့သည့်အပြင်
သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကို ကိုယ်စီ ကိုယ်ငှ စနစ်တကျ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မလုပ်ဆောင်ခဲ့၍ ဖြစ်သည်ဟု စာရေးသူ ဆရာကြီးဦးမြင့်ဆွေက ဆိုထားသည်။ ယခုစာအုပ်တွင် အိန္ဒိယပြည်၌ ဗုဒ္ဓမပေါ်ထွန်းမီ ဘာသာရေးအခြေအနေ၊
ပထမမှ တတိယထိ သင်္ဂါယနာတင်ခြင်းအကြောင်း၊ အသောကခေတ်နောက် ဗုဒ္ဓသာသနာအခြေအနေ၊ သာသနာပြုစေလွှတ်ရာ ကိုးတိုင်းကိုးဌာနအကြောင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းရှိ တိုင်းကြီး ၁၆ တိုင်းအကြောင်း၊ အဘိဓာန်ကျမ်းလာ
အိန္ဒိယ တိုင်း ၂၁ တိုင်း၊ ထေရဝါဒသာသနာ အိန္ဒိယ၌ ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးခြင်း၊ သုင်္ဂမင်းများခေတ်၊ ကနိရှကမင်းများ လက်ထက်၊ ဂုပ္တမင်းများအကြောင်း၊ ဗင်္ဂလားပြည်မင်းများ၊ ဟိန္ဒူဝါဒီတို့က ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့ကို နှိမ်နင်းခြင်း၊ အိန္ဒိယပြည်နှင့်
မူဆလင်၊ မူဆလင်တို့ ဖျက်ဆီးသည့် နေရာများ၊ နာလန္ဒတက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓဂယာမြို့၊ မဟန့်ဂီရိနှင့် ဗုဒ္ဓဂယာအကြောင်း အစရှိသည်ဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဗုဒ္ဓသာသနာသမိုင်းကြောင်းဖြစ်စဉ်များကို အထောက်အထား
ခိုင်လုံစွာဖြင့် သုတေသနပြု ရေးသားထားသည်။ ဤစာအုပ်သည် မန္တလေး-ရန်ကုန် ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၏ပြဌာန်းကျမ်းစာ တစ်စောင်ဖြစ်သည်။
ဒီစာအုပ်ကို ကျနော် စကန်ဖတ်ပြီး မြန်မာကျူးပစ်က ကိုဇေကြီး၅၅ ကပီဒီအက်ဖ်လုပ်ပြီး ကိုဗမာ့သွေးက ကဗျာရေးပေးထားတာပါခင်ဗျာ။
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာက ညိအကိုမောင်နှမများကို ဓမ္မဒါနလာပြုတာပါခင်ဗျာ။
ဒီစာအုပ်လေးလိုချင်လို့ပါခင်ဗျာ လင့်သေနေလို့ ကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်တင်ပေးပါလားခင်ဗျာ
ဒီနေရာမှာ (http://www.mediafire.com/?9ddgvklcneecmi9) အမြန်ယူလိုက်ပါ..နောက်ဆိုရင် ဒါလည်း လင့်သေသွားနိုင်ပါတယ်
စာအုပ် ကို မြန်မာကျူးပစ်သာသနာ့ပါလ ညီအကိုမောင်နှမများကိုယ်စား စကန်ဖတ်ပီဒီအက်ဖ်လုပ်ပြီး လှူဒါန်းပါတယ်။
စာအုပ်ဖတ်ရန် စာအုပ်ပုံကို နှိပ်ပါ။
ဤစာအုပ်တွင် သက်သတ်လွတ်အစကမ္ဘာဦးက၊ သက်သတ်လွတ်ဟူသည်၊
ဒေဝဒတ်နှင့်သက်သတ်လွတ်ပြဿနာများ၊ လယ်တီဆရာတော်၊ဘုန်းတော်ကြီးဦးသီလ၊ တည်တောဆရာတော်၊မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်၊ ညောင်ကန်အေးဆရာတော်၊ချမ်းအေးဆရာတော်၊
ရွှေင်္ဟသာဆရာတော်၊ သာမညဆရာတော် စတဲ့ထင်ရှားသောဆရာတော်ကြီးများ၏
စာအုပ်ကို ဖတ်ရန် ဒေါင်းရန် စာအုပ်ပုံကိုနှိပ်ပါ။
မြန်မာကျူးပစ် သာသနာ့ပါလ ညီအကိုမောင်နှမများကိုယ်စား ကျနော် စကန်ဖတ်ပြီး ဒါနပြုထားတာပါ။
MEF က ဘာသာရေးညီအကိုမောင်နှမများကို လာပြီး မျှဝေဒါနပြုတာပါခင်ဗျာ။[/color]
မြန်မာကျူးပစ်သာသနာ့ပါလမောင်နှမများ ကိုယ်စား ကျနော်က စကန်ဖတ်ပြီး ပီဒီအက်ဖ်လုပ်ထားတာကို MEF ညီအကိုမောင်နှမများကို လာမျှဝေဒါနပြုတာပါခင်ဗျာ။
တစ်ဆင့်ပြန်လည် ဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့် ဓမ္မဒါနပြုကြပါခင်ဗျာ။
ကိုတေဇတို့ ကျူးပစ်ဖိုရမ်မှာ စကန်ဖတ်ထားတဲ့ မဟာဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်း (၆)တွဲ ရှစ်အုပ်ပါ. .. စာမျက်နှာ ငါးဆယ်ဆီ ခွဲပီ တင်ထားတာပါ...
စာအုပ်လိုက်ဒေါင်းလုပ်ချချင်ရင်.. ဒီမှာ ဒေါင်းလုပ်ချပါ.....
စာအုပ်ဖတ်ရန် ဒေါင်းရန် စာအုပ်ပုံကို နှိပ်ပါ။
မဟာဗုဒ္ဓဝင် စာအုပ်များကို မြန်မာကျူးပစ် သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ဝင် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကိုယ်စား
ကိုzaygyi 55 က စကန်ဖတ်ပီဒီအက်ဖ်လုပ်ကာ ဓမ္မဒါနပြုပါသည်။
တစ်ဆင့်ပြန်လည် ဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့် ဓမ္မဒါနပြုကုသိုလ်ယူကြပါခင်ဗျာ။
မဟာဗုဒ္ဓ၀င် ပထမတွဲ (ဒုတိယပိုင်း)
မဟာဗုဒ္ဓဝင် ဆဌမတွဲ ပထမပိုင်း
မဟာဗုဒ္ဓဝင် ဆဌမတွဲ ဒုတိယပိုင်း
မြစ်ကြီးနား ၀ိစိတ္တသာရ၀ါဒ ဝိနိစ္ဆယ
နိုင်ငံတော် သီးခြားဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ (၁၆/၂၀၀၈)
နိုင်ငံတော် သီးခြားဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ အမှတ်(၆)
မိုးညို(မြောက်ဥက္ကလာပ) ၀ါဒ ဝိနိစ္ဆယ
နိုင်ငံတော် သီးခြားဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ အမှတ်(၇)
နိုင်ငံတော် သီးခြား ၀ိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ အမှတ် (၃)
နိုင်ငံတော် သီးခြားဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ အမှတ် (၈)
နိုင်ငံတော် သီးခြား ၀ိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ အမှတ် (၄)
နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ နိုင်ငံတော် သီးခြား ၀ိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ အမှတ် (၁၁)
နိုင်ငံတော်သီးခြားဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ အမှတ် (၁၂)
မြန်မာကျူးပစ် သာသနာ့ပါလမောင်နှမ များကိုယ်စားဓမ္မဒါနပြုပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မဝါဒ ( မိုးပြာဝါဒ)ဘာလဲ ဘယ်လဲ-သင်္ဂါဟက(တောင်သာ)
​အောက်​ကလင့်​က မရ​တော့ဘူး။ :_(